Dingana 3: fantaro ireo mpihaino kendrenao
Rehefa mamolavola drafitra fifandraisana, dia mamantatra ny mpihaino anao ny dingana lehibe indrindra aorian'ny famaritana ny tanjona sy ny tanjona. Mba hahafahana mifampiresaka stratejika, mila manana tanjona ny mpihaino iray.
Jereo ny famelabelarana fohy momba ny famantarana ny mpihaino anao:
Misy dingana telo ato amin'ity fizarana ity: ny famaritana ireo (mpihaino) kendrenao, ny famantarana ny soatoavin'izy ireo sy ny olana atrehin'izy ireo ary ny fitanisana ireo fifandraisana misy azonao atao miaraka amin'izy ireo.
Ny mpijery dia tsy mpihaino
Raha miezaka mikendry ny tsirairay isika, dia tsy maharesy olona. Ny kely kokoa sy ny mombamomba ny mpihaino dia mora kokoa ny mamorona fifandraisana mifantoka izay hampandroso ny mpihaino hanao zavatra. Miezaha haka sary an-tsoratra ny mpihaino anao ary hamaritanao hoe iza izy ireo, sy ny endrik'izy ireo, ary ny zavatra ataon'izy ireo. Zarao ny mpihaino anao amin'ny fampiasana ireo sokajy tena manan-danja amin'ny asanao, toy ny demografia, ny jeografia, ny fomba fiainana. Ohatra: lehilahy an-drenivohitra ambanivohitra 25 izay manana fiara; mpivarotra mandeha matetika any Tanzania; na mpamboly tsy miankina ao Palau.
Mpanapa-kevitra sy mpanararaotra
Ny mpihaino anao no manan-danja indrindra izay afaka manatanteraka ny tanjonao - ilay mpanapa-kevitra. Io no olona izay manana fiantraikany mivantana amin'ny tanjonao. Azo atao ny manatratra mivantana azy ireo, na indraindray, amin'ny olona izay mihaino azy ireo indrindra - ireo influencers.
Ohatra: Raha tanjona ny hampitsahatra ny fifohana sigara ao an-tanànanao amin'ny 2025, dia ny tanora no ao an-tanàna, ary ny mpihaino iray dia mety ho tanora hafa.
Mifantoha amin'izay azonao resena
Ny fandarohana ireo izay manohitra ny tanjonao dia mety hahatonga fahasorenana sy tsy fahombiazana. Sarotra be ny manova ny sain'ny olona iray, fa rehefa misy olona iray fehezanteny iray ahafahana mamely azy ireo amin'ny lalana iray na ny iray hafa. Ny dingana voalohany tsara dia ny mamantatra ireo olona tia saina izay mikarakara sy mikatsaka ny tanjonao. Afaka manampy amin'ny fiantraikany amin'ireo mpitsidika fefy izay mety ho liana na hanampy azy ireo saingy tsy ampahafantarina, na iza no mety tsy ho tonga saina.
Zava-dehibe sy mahitsy
Fantaro ny zavatra tian'ny mpihaino anao mba hahafahanao mampiseho ny fomba ifandraisan'ilay tetik'izy ireo amin'izy ireo
"Ny fahafantarana ny dingana nataonao ho an'ny mpihazakazaka dia namela ahy hiantehitra amin'ny kirin'ny olona izay niezahako nanolo-tanana sy nahita ny fahitan'ny fahatsapan'izy ireo sy ny andraikitro isan'andro.
-Participant, Caribbean Strategic Learning Exchange Communication
Manomboha ny mpihaino anao is. Tsy maintsy mifanena amin'ny toerana misy azy ianao, fa tsy any amin'izay tianao. Ny olona dia miahy bebe kokoa momba ny olana iray rehefa voafitaka amin'ny fomba iray mampifanaraka ny soatoavina, ny ahiahiny ary ny finoany. Manontania tena hoe inona no iankinan'ny mpihaino sy ny lanjany? Inona no tiany ary ankafiziny? Ny soatoavin'ny olona dia avy amin'ny traik'efa iainana, tantara, toe-tsaina, filàna, ary finoana. Ny fampifanosana ny paikadinareo momba ny soatoavin'ny mpihaino sy ny fampisehoana ny fifandraisana amin'ny zavatra izay efa nokarakarainy dia hanampy amin'ny fifantohana sy ny fanohanana azy ireo.
Ohatra: Ny mpanjono dia mety manome lanja ny trondro ho sakafo, fa ny mpitsabo SCUBA dia mety manome lanja ny trondro ho an'ny hatsarana na fialamboly.
Ohatra amin'ny fomba ahafahan'ny olona mahita zavatra mitovy amin'ny fomba samihafa mifototra amin'ny zavatra sarobidy (tsindrio raha hanatsarana azy).
Eritrereto ny sakana mety hitranga amin'ny fomba fanaon'ny mpihaino
Raha toa ny tanjonao dia misy hetsika iray - ary amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra - izany hoe mila mamantatra ny mety ho sakana mety hijanona na hamarana ny mpihaino anao tsy handray fepetra hahafahanao mandresy azy ireo. Ohatra, raha mangataka olona iray hamandrika tsara ny bateria fiara ianao, saingy ny fomba fanolorana faniriana dia mahasosotra azy ireo, izany dia sakana iray handresena. Ny asanao dia ny mamantatra ny sakana mety sy ny mamolavola fomba fiasa mba hampihenana ny sakana na hanomezana loka izay mahatonga azy ireo ho mendrika ny handray andraikitra, na dia tsy mahasoa aza izany.
Ahoana no hianaranao momba ny mpihaino anao?
Raha ny "mpanatrika" dia tarika iray na vondrona kely fantatrao / / mpiara-miasa / mpiara-miasa / fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina dia mety ho azonao atao ny mamaly ny sasany amin'ireo fanontaniana momba ny ahiahiny sy ny asany mifototra amin'ny fahalalanao manokana sy ny fikarohana an-tserasera.
Raha toa ka vondrona mahazatra kokoa na tsy dia fantatra loatra ny 'mpihaino anao', dia mety ho hitanao ny fikarohana efa misy momba ireo toetra toy ny lahy sy vavy, ny taona, ny haavon'ny fampianarana, ny finoana, sns., Maimaim-poana amin'ny aterineto.
Raha misafidy ny hampiasa vola amin'ny fanaovana fikarohana vaovao ianao, izay mety ho lafo, dia aza hadino ny manombatombana tsara ny fomba fikarohana ka mifidy ny fomba mety mifanaraka amin'ny ilainao. Ho fanampin'izay, diniho izay fanombanana rehetra hatao amin'ny faran'ny dingana ataonao. Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mampiditra fanontaniana amin'ny fitsapana mialoha izay hametraka tsipika fanombanana.
Misy karazany roa ny fikarohana - qualitative (ohatra, fa tsy amin'ny tarehimarika) sy ny quantitative (oh: amin'ny endrika tarehimarika). Ny fitaovana kalitao, toy ny vondron'olona mifantoka sy ny dinidinika, dia mety hahomby kokoa amin'ny mpihaino marobe, ary ireo fitaovana maro toy ny fitsapan-kevitra sy ny fitsapan-kevi-bahoaka dia mahomby kokoa ho an'ny mpihaino marobe. Ho an'ny fanadihadiana amin'ny antsipirihany momba ny fikarohana kalitika sy ny vondron'olona, ​​ny fampiasana ireo teknika ireo, ny fomba fiasan'izy ireo, ary ny tsy fahampian'ny toetrany, dia jereo ny Overview Qualitative vs. Quantitative Research Overview (PDF, 229k).
Izy rehetra dia mikasika ny fifandraisana
Raha vao fantatrao ny mpihaino tokony ho azonao, ny dingana manaraka dia ny mamaritra raha manana fifandraisana amin'izy ireo ianao. Raha miasa amina vondrom-piarahamonina madinika ianao na miaraka amin'ny mpihaino maromaro, dia mety ho azonao atolotra mivantana na hizaranao hafatra amin'ny alalan'ny olona mifandray mivantana aminy, toy ny namana, mpianakavy, olom-pantatra, na mpiara-miasa. Ny asanao dia ny mamantatra hoe iza amin'ireo mpihaino anao no ho voataona indrindra? Raha miasa any amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe iray na tanàna ianao na miaraka amin'ireo mpihaino marobe, dia mety tsy hampiharina ireo karazana fifandraisana mivantana ireo, ary mety tsy maintsy mamerina ny fampitam-baovao ianao na ireo mpitondra hafatra hajaina sy malaza, izay hanaparitahana bebe kokoa ny fizarana taktika.
Ny anjaranao (> voatondro 25 minitra)
Ampiasao ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWorksheet Audiencemanokatra fisie PDF hanoratra mpihaino manokana, ny soatoavina sy ny ahiahiny, ary ny fifandraisanao amin'izy ireo.
Fantaro ny anao mpanapa-kevitra (s) - olon-tsotra na vondrona izay afaka manao ny zava-kendrenao amin'ny zava-misy amin'ny alalan'ny fanaovana fihetsika manokana na fanovana fihetsika manokana. (Soraty amin'ny an-tsipiriany ny anaran'ny olona raha fantatrao izy ireo.) Diniho ireto fanontaniana manaraka ireto:
Iza ireo olona voakasika amin'ny olana sy / na ny tetikasanao?
Misy vondrona voafaritra / iza no miteraka ilay olana?
Iza amin'ireo no manana ny fiantraikany ara-politika na ara-tsosialy?
Avy eo eritrereto ny olona na ny vondrona ary inona no tiany (ny ahiahiny voalohany) amin'ny famaliana ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona no zava-dehibe indrindra (fototra) / laharam-pahamehana eo amin'ny fiainana?
Inona no inoany momba ny olana / tetikasanao?
Iza / inona no hajainy sy ankafiziny?
Diniho avy eo barotra mety izay mety hanakana ny mpihaino tsy handray fepetra / hanohana ny antony. Inona no fialantsiny azon'izy ireo, ohatra, dia lavitra loatra ny fiara, lafo, tsy ampy ny fotoana? Fanamarihana: mitanisa ireo ao anatin'io fizarana io miaraka amin'ireo olana lehibe.
Farany, diniho izay fifandraisana manana an'ity olona ity ianao / olona. Hahita mivantana azy ireo ve ianao na hahatratra azy ireo amin'ny olon-kafa? Diniho ireto fanontaniana manaraka ireto:
Inona ny fototra niaviany?
Iza no namany akaiky, mpiara-miasa, mpianakavy?
Iza no ataon'izy ireo ho torohevitra? Iza no atokisany sy henony?
Raha tsy afaka mitaona an'io olona io ianao, iza no afaka manao izany?
Mandehana any amin'ny Dingana 4: Ataovy ny Hafatrao (s) Matter
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMialà avy ao amin'ny Tower of Ivory: Torolàlana iray amin'ny fanatanterahana ny siansa momba ny siansa (boky momba ny fividianana)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFantaro ny Activation Point®manokatra fisie PDF